hataru/हटारु: ज्ञानेन्द्रले झन्डै गोली ठोकेर मारे
उनीहरू युद्धमा गए पनि केही मान्छे त फेरि यतै सक्रिय भए । एफएम चाहियो भनेर आए, म अमेरिका गएँ । त्यसपछि क्यानडा पुगेर
एफएम ल्याइदिएँ ।
सोल्टी होटलमा कार्यक्रम थियो, कार्यक्रममा मोबाइल अफ थियो । पछि दारु पनि खाइयो । हिँड्ने वेलामा मोबाइल अन गरेको त साधुरामले फोन गरेर भन्छ, 'ए साला, कुकुरको मुत खाएर बसेको ?' अनि मैले भनेँ, 'तँचाहिँ जनताको रगत खाएर बस्ने ?' झन् कस्सिएर 'बाहिर निस्की तलाईं ठोक्छु' भन्छ । मैले भनेँ, 'हेर भाइ, तँ पनि कम्युनिस्ट, म पनि कम्युनिस्ट, हतियारले हान्न पाइँदैन, फाइट खेल्ने भए खेलौँ ।' अनि पुलिस-सुलिसलाई फोन गर्ने हैन है भन्छ । मैले भनेँ, 'फोन नकाटी जाउ“m, पुलिसलाई फोन गर्ने चान्स नै भएन ।'
महाराजगन्ज भेट्ने कुरा भयो, फोनमा गाली गरागर । मेरो ड्राइभर कापिरहेको थियो, वडाध्यक्षले त झन्डै पाइन्टमै पिसाब फेरेछ । महाराजगन्ज पुगेपछि चाबहिल जाउ“m भन्छ । मैले भनेँ, 'ठोक्नचाहिँ पाइँदैन, जहाँ भने पनि जान्छु ।' मेरो गाडीका अगाडि-पछाडि उनीहरूका मोटरसाइकल । गालीबेइज्जती त कति कति Û त्योबीचमा त्यसकोे अर्को मोबाइलमा फोन आयो, उता कुरा गरेर मलाई भन्छ, 'तँलाई आज नठोक्नु भन्ने खबर आएकोले बचिस् ।' म त झसंग भएँ । भनेँ, 'ए बेइमान, तँैले मार्न पो खोज्याथिस्, फाइट मात्र खेल्ने भनेको होइन ?' झुक्याएर झन्डै मारेछ ।
तपाईं १० रुपैयाँको साग किन्न जानुभयो भने कतिपटक ओल्टाइपल्टाई गर्नुहुन्छ ? कीरा छ कि, प्वाल परेको छ कि, सुकेको छ कि भनेर हेर्नुहुन्छ । आज खाएर भोलि मल हुने कुरामा मान्छेले कति बुद्धि लगाउँछन् । अनि, मेरो छोरीले जिन्दगी बिताउने मान्छे कस्तो छ भनेर बुझ्न नपाउने ? सास गन्हाउँछ कि, दीर्घरोगी छ कि, जाँडरक्सी खान्छ कि, वेश्यावृत्ति गर्छ कि भनेर बुझ्न नपाउने ? बाबुआमाको अगाडि उभिएर एकपालि हेर्दैमा थाहा हुन्छ, लभ गर्नु परेन । पार्कमा बसेर कविता सुन्नु/सुनाउनु परेन । तब पो कुरो बुझिन्छ र आफ्नो
लायकको छानिन्छ ।
heeratamang August 25, 2012 at 2:02 AM
अब सोच्नुस् , यात्रा ठुला बडा नाम् चल्या लाई त ठोक्ने र मार्ने कुरा गर्ने ती माओवादी ले बिचरा जनता लाई के मात्र गरेन होला ?